ငါးခေါင်းမျှစ်ချဉ်ပာင်းရည် ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
ငါးတန်ခေါင်း.............၁ ခု( ပါးပာပ်များထုတ်၊ ရေဆေးသန်.စင်ပြီးရင် ခပ်ကြီးကြီး
အတုံးများရအောင်ပိုင်းပါ။ ငါးခေါင်းပာင်းရည်မှာငါးတန်ခေါင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ် )
မျှစ်ချဉ်.................... ၃၀ ကျပ်သား
ကြက်သွန်နီ..............၂လုံး ( ၈ စိတ်ခွဲပါ)
ခရမ်းချဉ်သီး............. ၃ လုံး( ..... ။.....)
ပဲပြား.......................၂ တုံး ( ၁လက္မအရွယ်ပိုင်းဖြတ်ပါ)
စပါးလင်...................၂ ချောင်း( အဖြူရောင်အပိုင်းသာ. ရိုက်ပြားပြီးထုံးချည်ထားပါ)
ချင်း..........................၁ တက် ( ရိုက်ပြား )
ကြက်သွန်ဖြူ...............၅ တက် ( ....။......)
ရှမ်းနံနံ..................... ၃ပင် (ပါးပါးလှီး)
ကောက်ရိုးမှို (သို.)ငွေနှင်းမှို......အနည်းငယ် (သင့်တော်သလောက်ပိုင်းဖြတ်ပါ)
ငုံးဥ............................၂၀ လုံး( ပြုတ်ပြီးအခွံခွာထားပါ )
တောရှောက်ခါး၇ွက်.......၄ ၇ွက်ခန်. (မရှိလည်းရ )
ပထမဆုံးဒယ်အိုးတစ်လုံးမှာဆီအနည်းငယ်နှင့် ချင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ပဒဲကော ၊စပါးလင် တို.ကို တုံယမ်းချဉ်စပ်တုံး(၂) ခုနဲ.အတူဆီသတ်လိုက်ပါ...။နနွင်းမှုန်.
ပာင်းရည်တည်မည့်အိုးထဲသို.ပြောင်းရွှေ.ထည့်လိုက်ပြီး...ပဲပြားတုံး ၊ ငုံးဥ ၊မှို ကြက်ပြုတ်ရည်တို.ပေါင်းထည့်ပြီး.ငါးငံပြာရည်၊ ပာင်းခတ်မှုန်.၊ သကြား ၊ ရှောက်ရည်(သို.) သံပုရာရည်တို.ဖြင့်အရသာသွင်းပါ....။
တစ်ပွက်ဆူလာလျှင်မီးကိုလျှော့ချပြီး..ကြက်သွန်နီ ၊ခရမ်းချဉ်သီး ၊
ရှမ်းနံနံတို.ကိုဖြည့်စွက်ပါ..။ နောက်ဆုံးငါးခေါင်းတွေနှုးအိပြီး ချိုချဉ်စပ်အရသာလေး